စက်သုံးဆီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြသည့် လုပ်ငန်းရှင်၊ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း – PPRD
၁။ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ ရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်သော ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း များကို ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းကမ်းချက် များနှင့်အညီ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်စေရန်၊ ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်စေနိုင်ရန်၊ ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်း ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လွတ်လပ်၍ မျှတသော စျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှု ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက် စေရန်၊ နိုင်ငံတော်၏ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်နှင့် စွမ်းအင်လုံခြုံရေး အာမခံချက်ရှိစေရန်နှင့် နိုင်ငံတော် အတွက် အခွန်အခများရရှိစေရန်တို့နှင့်အညီ ယင်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၈ ပါ လုပ်ငန်းများကို လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြလမ်းညွှန်မှုခံယူပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၂။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ပုဒ်မ ၈ ပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များ အပြင် လုပ်ငန်းစဉ် (၁၃) ရပ် ချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရေနံထွက် ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၏ Supply Chain တစ်ခုလုံးအား စနစ်တကျ စောင့်ကြည့်လေ့လာသုံးသပ်ရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အစီအမံများချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်−
(က) စွမ်းအင်လုံခြုံရေးအစီအမံနှင့် မဟာဗျူဟာများရေးဆွဲဆောင်ရွက်ခြင်း
( ခ) ဈေးကွက်အခြေအနေကို လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် သုတေသနပြုခြင်း
( ဂ) လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား Online အခြေပြုစနစ်သို့ ကူးပြောင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
(ဃ) Database စနစ်တည်ထောင်ခြင်း
( င) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် သက်ဆိုင်ရာ Stakeholders များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၃။ ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံနှင့်အဝှမ်း ရေနံထွက်ပစ္စည်းများ၏ ဖြည့်ဆည်းမှုကွင်းဆက် (Supply Chain) နှင့်ပတ်သက်၍ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော ပြည်ပမှစက်သုံးဆီ တင်သွင်းခြင်း၊ ပြည်တွင်းတွင် ထုတ်လုပ်ခြင်း (နိုင်ငံပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိက)၊ ပြည်တွင်း၌ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း၊ စက်သုံးဆီ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းများအပြင် အခြားရေနံထွက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်း ထုတ်လုပ် သိုလှောင် သယ်ယူ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းစာရင်း အချက်အလက်များကိုလည်း မှန်ကန်ပြည့်စုံစွာ ရယူစိစစ်သုံးသပ်၍ စနစ်တကျထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်ခြင်း၊ ယင်းရေနံထွက်ပစ္စည်း များအား သတ်မှတ် အရည်အသွေးနှင့် စံချိန်စံညွှန်းများ မှန်ကန်ကိုက်ညီမှုရှိ−မရှိ စစ်ဆေးကြပ်မတ်ခြင်း တို့အတွက် လိုအပ်သည့်အစီအမံများအားရေးဆွဲ၍ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြ လမ်းညွှန်မှုခံယူပြီး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အပြင် ယင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ အခန်း (၆) ပါ တားမြစ်ချက်များကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ကြောင်း ထင်ရှားပါက အခန်း (၇) ပါစီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်းအရ အရေးယူခြင်း၊ အခန်း (၈) ပါ ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်များနှင့်အညီ အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုအရေးယူခြင်းတို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ပါသည်။
၄။ နိုင်ငံတော်၏ စက်သုံးဆီကဏ္ဍ Supply Chain တစ်ခုလုံး၏ စာရင်းဇယားအချက်အလက် များအား စုစည်းရယူ၍ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသို့တင်ပြပေးနိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ စက်သုံးဆီအမျိုးအစားအလိုက် တင်သွင်းသည်မှ End User အထိ အဆင့်ဆင့်သောလက်လီလက်ကား ရောင်းချမှုဆိုင်ရာ သတင်းစာရင်းအချက်အလက်များကို ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြ ပေးနိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း မြန်မာနိုင်ငံစက်သုံးဆီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်း (MPTA) သည် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနနှင့်ပူးပေါင်းပြီး ပြင်ပနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ သက်ဆိုင်ရာ Stakeholders များ အားလုံး၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် Pilot Project အား ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ အရောင်းဆိုင်များတွင် POS စနစ်တပ်ဆင်ခြင်း စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကာ ဆက်လက်၍ ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင်လည်းဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်ခဲ့ရာ လက်ရှိတွင် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ အနေဖြင့် ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် တပ်ဆင်ပြီး ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
၅။ ထိုသို့ MPTA အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ရာ၌ Stakeholders များ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အခြေအနေ အရ ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်ရန် အားနည်းမှုရှိနိုင်သဖြင့် ၃၁-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ၏ (၁/၂၀၂၀) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးတွင် MPTA မှ ဆောင်ရွက်နေသော Online Monitoring လုပ်ငန်းများအား ရေနံပစ္စည်းများကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနက လွှဲပြောင်းရယူပြီး သတင်းစာရင်းအချက်အလက်များ ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ရရှိစေရေးအတွက် Stakeholders များအား လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်းကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော Pilot Project နှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်တို့တွင်လည်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းစာရင်းအချက်အလက်များအား ယင်းတို့ထံသို့ပေးပို့ရန်နှင့် လိုအပ်မည့်နည်းပညာ နှင့် ကုန်ကျစရိတ်အား MPTA မှ ကျခံပေးရန်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
၆။ ဖော်ပြပါ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ ၂၂-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ရေနံထွက်ပစ္စည်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် MPTA ထံမှ ၎င်းတို့နှင့် ပြင်ပကုမ္ပဏီတို့ စာချုပ်ချုပ်ဆို ဆောင်ရွက်နေသည့် Online Monitoring စနစ်နှင့်သက်ဆိုင်သော Cloud based System ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအားလည်းကောင်း၊ Online Monitoring စနစ်အပေါ် ကြီးကြပ်စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများအားလည်းကောင်း၊ စနစ်တစ်ခုလုံးအား စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ကို လည်းကောင်း လွှဲပြောင်းလက်ခံရယူခဲ့ပြီး၊ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီအား ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်ကိုသာ ဆက်လက်ပံ့ပိုး ဆောင်ရွက်စေခဲ့ပါသည်။
၇။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ နှင့်အညီ စက်သုံးဆီဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ကြပ်မတ်မှုများကို ဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်နှင့်အညီ MPTA ထံမှလွှဲပြောင်းရယူခဲ့သော Online Monitoring စနစ်ဖြင့် သတင်းစာရင်း အချက်အလက်များကို တိကျမှန်ကန်စွာ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီရယူပြီး စိစစ်သုံးသပ်ကာ ဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သော နိုင်ငံတော်၏ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်နှင့် စွမ်းအင်လုံခြုံရေး အာမခံချက်ရှိစေရေး အတွက် ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး သတင်းစာရင်း အချက်အလက်များ လုံခြုံမှုရှိစေရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မသက်ဆိုင်သူများလက်ဝယ်သို့ မရောက်ရှိစေရေးအတွက် ဌာနတွင်း လုံခြုံရေးအဆင့်အတန်းများသတ်မှတ်ကာ အထူးကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၈။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် Online Monitoring စနစ်အား MPTA ထံမှ လွှဲပြောင်းလက်ခံရယူပြီးနောက် ဆောင်ရွက်ဆဲ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အရောင်းဆိုင်များ၊ Terminal များတွင် POS တပ်ဆင်ခြင်းအပါအဝင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက် များကို ဖြည့်ဆည်းစေပြီး Monitoring စနစ်သို့အမြန်ဆုံးချိတ်ဆက်၍ သတင်းစာရင်းအချက်အလက်များ ရယူခြင်း Pilot Project အား အထက်ဌာနများ၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ဒုတိယသုံးလပတ်အတွင်းအပြီး ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်၊ ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့ အစည်းများအနေဖြင့် အထူးအလေးထား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အားနည်းချက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါက ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
Mot impotens offers, fastest due mens. Countries of culture in coupon postmodern times. best online casino The sex and niet of professional determine the professional landen.